Ireo fiasa 50 an-tampony izay mahatonga ny IOS5 mahatalanjona | Vaovao IPhone
Henry A Lozano | | Vaovao IPhone, iOS 5, Apple products, maro
Na dia nanambara endri-javatra vaovao maherin'ny 200 aza i Apple tao amin'ilay rafitra fiasa vaovao "kintana" IOS5, nandritra ny WWDC dia tsy nanambara mihoatra ny 16 izy ireo, izay voatanisa ao amin'ny tranonkalany eto
Etsy ambany no hasehoko anao ny sasany izay tsy voamariky ny besinimaro:
- Macro an-tsoratra: Ity fampiasa vaovao ity dia ahafahanao manafoza mandeha ho azy ny fampiasana fampahalalana matetika. Izy io dia voalamina ao amin'ny Settings> General> Keyboard> Shortcuts izay misy ny hitsin-dàlan'ny hitsin-dàlana izay
nosoloina ilay lahatsoratra namboarina teo aloha. Mety ho lasa tena mahaliana ity safidy ity raha mandefa fanohanana amin'ny fampifanarahana azy ireo amin'ny alàlan'ny Icloud i Apple.
- Fampandrenesana amin'ny alàlan'ny LED Flash: miafina tsy miafina ao amin'ny fikirana> General> Accessibility menu no vatosoa kely ity ahafahanao mahita (sy mahatsapa) rehefa misy miantso anao. Tsy isalasalana fa
Hisarika ny mpampiasa Blackberry izany, zavatra azo antoka fa tokony ho nampidirina tao amin'ny IOS nandritra ny fotoana ela.
- Fampihorohoroana manokana: ahafahanao manome lamina hovitrovitra tsy manam-paharoa na dia miaraka amin'ny lisitry ny fifandraisana aza. Afaka namorona lamina hovitrovitra isika.
Ary inona no nanjo ireo fiasa efa ho 180 hafa? Amin'izao fotoana izao, afaka manohy mitady amin'ny alàlan'ny lisitry ny toetra 144 izay hitan'i TechZoom tsy miankina izahay ary nanangona azy ireo tamin'ireto manaraka ireto rohy ary manavao hatrany.
Manaraka izany dia ezahako aseho anao amin'ny fomba mazava indrindra amin'ny 50 amin'ny Espaniôla voalohany, antenaiko fa tianao izany:
1. Ivotoerana fampandrenesana: Rafitra fampandrenesana vaovao.
2. Fanamarihana nohatsaraina teo an-tampon'ny efijery.
3. Fampandrenesana eo amin'ny efijery hidin-trano: Mety hanokatra ilay rindranasa voalaza ny fikororohana ny kisary.
4. Safidy hisafidianana ny fampandrenesana isaky ny fampiharana.
5. Fandaminana fampandrenesana amin'ny alàlan'ny fampiharana, fotoana. Sns
6. iMessage: hafatra an-tsoratra eo anelanelan'ny fitaovana IOS5 amin'ny alàlan'ny Wifi na 3G (izay tsy tokony ho nampihomehy teo amin'ireo mpandraharaha telefaona)
7. Kiosko na Newstand: mitovy amin'ny Ibooks fa mitahiry famandrihana amin'ny magazine, magazine ary gazety.
8. Fampahatsiahivana: Lisitra iray ahafahanao mamorona fampahatsiahivana mifandraika amin'ny fotoana sy toerana misy anao (toerana lehibe)
9. Twitter: Ny fampidirana amin'ny Twitter mifandraika amin'ny Safari, Photos, Youtube ary ny fahafahan'ny mpandraharaha manohy mamorona apis hanavao na hamorona rindranasa vaovao.
10. Efitra fitaratra na Mirroring Airplay: Ity dia miasa amin'ny Ipad2 izay
mamerina izay hitantsika amin'ny iPad-nay izany.
11.Icloud: serivisy vaovao maimaimpoana ho an'ny fitehirizana sy ny fampifanarahana ny
ireo fitaovana mifandray mivantana amin'ny kaonty iTunes, izay
Izy io dia ahitana gigabytes 5 maimaimpoana.
12. sokafy ny fampiharana fakan-tsary avy amin'ny efijery hidin-trano amin'ny fanaovana
Ny fanindriana indroa amin'ny bokotra an-trano dia hanokatra ny fakan-tsary ho azy.
13. Makà sary amin'ny bokotra bokotra.
14.fampiasana ny Grid fakan-tsary hanomezana fifantohana mazava kokoa sy hahatratra tsaratsara kokoa
Saripika. Marihina fa ity fampiasa ity dia tao amin'ny Camera +
15.Zoom: Manaova fihetsika mikintona amin'ny fampiharana fakantsary
mamela ny fampiasana zoom.
16. Mikasika ny efijery amin'ny fakantsary fakantsary mamela anao
fanatsarana ny fampisehoana sary.
17.Lock fampandrenesana fiara sy fifantohana fiara ho an'ny tsy fitoviana tsara kokoa.
18. Mikorisa miankavia mba hanokatra ny horonan-tsary.
19. Sary tapaka: Izay tsy misy ao amin'ny 3GS.
20. Amboary ny loko loko ao amin'ny sary, tsy misy amin'ny iphone
21. Ahodino ireo sary.
22. Fanesorana ny maso mena: mamafa, manitsy maso mena ao anatin'ny
23. Photo Stream: Amin'ny alàlan'ny iCloud amin'ny fitaovana rehetra mifandraika amin'ilay kaonty.
24. Alamino ao anaty fampirimana sary ireo sary.
25. Fikarohana ao anaty vakizoro na Takelaka ao anaty safari (amin'ny iPad fotsiny)
26.Safari Reader na Reader: Hampiasa safari ho mpamaky RSS.
27.Lisitry ny famakiana safari: Lisitra famakiana Safari, mitahiry ny
pejin-tranonkala rehefa mifandray amin'ny Internet ary vakio tsy misy famantarana
28. Fanatsarana ny zava-bita amin'ny ankapobeny amin'ny fanatsarana ny 4.3.3.
29. Fikarohana manokana, toy ny amin'ny firefox sy google chrome mamela
mivezivezy tsy misy soritra.
30. Ny data avy amin'ny tranonkala manokana dia azo esorina.
31. Tapaho ny tariby: ahafahana mampandeha sy manomboka ny fampiasana idevice nefa tsy ilaina izany
avy amin'ny solosaina pc na Mac.
32.Ao amin'ny rivotra na amin'ny tariby dia mamela ny fampifanarahana mandeha ho azy
tsy mila mampifandray ilay fitaovana amin'ny iTunes.
33. Fanavaozana ny lozisialy Delta: fisie fotsiny no havaozinao
novaina, tsy ilaina ny misintona ny IOS iray manontolo (Mitovy amin'ny
34. fampifanarahana Wi-fi: fampifanarahana tanteraka amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-fi.
35 Ampidino ary avereno mivantana avy amin'ny iCloud.
36.Fandrindrana ny lahasa Exchange.
37 Jereo ny lisitr'ireo fampiharana, boky ary mozika alaina
avy amin'ny Apple Store avy amin'ny IOS rehetra nifanaraka tamin'ny kaonty.
38. Fomba fanoratana an-tsoratra momba ny fanoratana mailaka (sahisahy,
sora-mandry, tsipika, sns)
39. Fanohanana an-tserasera nohavaozina ho an'ny mailaka fampiharana.
40. fehezo ny tabilao na kiheba.
41. Mahay misintona adiresy mailaka mankany amin'ny mailaka mankany,
kopia sy lohahevitra
42. karoka mailaka nohatsaraina.
43. Afaka manisy marika amin'ny sainam-pirenena na sainam-pirenena.
44. Fiarovana S / MIME.
45. Profile mombamomba ny Game Center.
46. ​​Torohevitra momba ny finamanana amin'ny GameCenter.
47. Torohevitra momba ny GameCenter.
48. Ny namana avy amin'ny lisitry ny namana.
49. Fidirana amin'ny App Store ao anatin'ny Game Center.
50. zava-bita vaovao toy ny Perks sy Points.
Ary mitohy ny lisitra ho an'ireo liana indrindra amin'ny fanohizana mitadidy fa afaka mandeha any amin'ny manaraka ianao rohy ary manohy mahita zava-baovao ho an'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo, azafady elaela aho saingy manantena aho fa mankafy azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 5 » Top 50 endri-javatra izay mahatonga ny IOS5 mahavariana
ecliptic dia hoy izy:
Mahagaga fotsiny !!!!
Valiny amin'ny eklipsa
Felo dia hoy izy:
Misy mahalala raha marina fa mamela anao handefa ny mombamomba ny tag ID5 an'ny mozika ny mozika rehefa alefa amin'ny alàlan'ny Bluetooth ???
Mamaly an'i Felo
Ho ahy dia misy iray tena ilaina tsy hita: farito ny sonia mailaka maromaro raha manana kaonty mailaka samihafa izahay; (
Misy mahalala raha toa ka efa misy ao amin'ny iOS 4.3 ireo fihetsika multitouch niseho tao amin'ny iOS 5?
Pablo, efa namaky azy rehetra aho ary tsy afaka nahita an'io.
Ny marina dia, toa ahy fa ho an'ny iPad dia hametraka azy ireo izy ireo fa tsy ho an'ny iphone ary zavatra tokony hiala izy ireo, manana ny jailbreak amin'ny hevitro aho ho an'ny zavatra vitsivitsy, saingy ny iray amin'izany, ny fihetsika multitouch izay manakana ny fiakanjanan'ny bokotra an-trano, heveriko fa izany indrindra no antony, noho izany dia misy ilàna azy ary miaraka amin'ny fotoana (fotoana lava izay raha) ny idevice dia tsy maintsy ovaina.
… Ary iray nandrasan'ny olona maro. Mahaiza mamafa antso tsirairay!
Fako IOS5 dia hoy izy:
Wow ... Ny zavatra rehetra dia efa ela no nisy jailbreak ... REHETRA.
Tsy hanavao aho, tsy mahita tombony.
Valiny amin'ny TrashIOS5
Felosontay dia hoy izy:
Misy ny tena mahaliana, rehefa mifantina lahatsoratra izao dia misy ny safidy hamaky azy ho anao, io no iray amin'ireo antony ampiasako ny JB, tena zava-dehibe izany rehefa manao fanazaran-tena ianao ary mamaky lahatsoratra iray ho an'ny ianao mandritra ny fanatanjahan-tena
Mamaly an'i Felosontay
Gnzl, omaly nandeha tany ISO5 aho ary milamina ny zava-drehetra, saingy tampoka dia tsy nisy intsony ny fifandraisana rehetra tamin'ny findaiko, nifandray tamin'ny iTunes aho ary tsy nisy, inona no azoko atao ankoatry ny famerenana amin'ny laoniny indray?
k mandeha .. tsy misy ela !! ho ahy dia fohy dia fohy izany hehe .. Te hahalala bebe kokoa .. xD misaotra !!
Salama Javier, momba ny fifandraisana ... raha mitandrina kely ny olana, ny zavatra voalohany hatoroiko dia ny hanaovanao kopia backup, izany hoe, ao anaty fandaharam-potoana, tahirizo ny backup-n'ny contact rehetra, dia alao antoka fa manana ianao icloud napetraka eo aminy solosaina izay ampifanarahinao amin'ny findainao, avy eo mandehana any amin'ny Settings> iCloud ary ampio ny kaontinao, toy izany koa mandeha amin'ny System Preferences> Email, contact ary calendars> ary ampio ny ID-nao amin'ny iCloud, avy eo manana ny fifandraisana amin'ny iPhone amin'ny 0 sy amin'ny mac-nao, mandehana any amin'ny fifandraisana ary ampidiro ny fifandraisana rehetra avy amin'ny nomaniny ho solon'izay nataonao. Farany, alao antoka fa rehefa mampifanaraka ny telefaoninao amin'ny safidin'ny Info ao amin'ny iTunes ianao dia tsy voamarika hanatsarana ny fifandraisana satria raha tsy izany dia ho hitanao ny fomba averina ireo mpifandray rehetra. Manantena aho fa miasa ianao satria mila manokana fotoana kely handefasana azy aho saingy milamina ny zava-drehetra ary mandeha tsara be izany.
Nunilo dia hoy izy:
Toa vaovao mahafaly daholo izy rehetra. Nividy iray tamin'ireny charger radio aho http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/15-increibles-accesorios-para ary tsy maintsy milaza aho fa nisy fotoana nahatonga ahy hadalana kely. Manantena aho fa amboarin'izy ireo amin'ny rafitra fiasa vaovao, na dia heveriko fa tsy nitovizany aza izany noho ny fandrakofana. Amin'ny lafiny iray dia te hanandrana ilay Icloud vaovao aho
Valiny tamin'i Nunilo
AppVault: afeno amin'ny teny miafina ny rindranasao (Cydia)
Ahoana ny fisoratana anarana ny fitaovana ampiasainao ho mpamorona hanavao ny iOS 5 sy hiasa ny zava-drehetra (havaozina)